Tianao ve ny hanakona ny data? Semalt dia manolotra Software Free Extraction Software
Ny fampahafantarana avy amin'ny tranonkala iray dia teknika sarotra ampiasain'ny orinasa isan-karazany. Ny fikambanana izay te-hanangona tahirin-kevitra amin'ny lohahevitra sasany dia afaka mandray soa avy amin'ireto programa manaraka ireto:
1. Ny mpangalatra
Ny fandrotrana Chrome dia manana lafiny maro be. Tsy vitan'ny fanangona antontan'isa fotsiny fa mpikaroka fototra iray. Tsy fitaovana be pitsiny loatra izay afaka manondrana ny angon-drakitrao ao amin'ny Google Spreadsheets. Ny angon-drakitrao dia azo adika sy voatahiry ao anaty takelaka, noho ny OAuth noho izany. Ny mpandroba dia tena tsara ho an'ny mpandrindra ny programa sy ny tsy mpandrindra.
Ny Web Harvest dia manana safidy amin'ny endrika samihafa ary dia programa lehibe ahafahan'ny angon-drakitra misokatra malalaka. Voasoratra ao amin'ny Java ary manangona angon-drakitra avy amin'ny tranonkala fototra sy avoaka. Ny Web Harvest dia mikendry indrindra ny pejy web-n'ny XML na HTML.
Scrapy dia iray hafa mahatalanjona fandrindrana angon-drakitra . Izany dia rafitra feno fitsangatsanganana feno miaraka amin'ny karazana sy safidy ampolony. Ny scrappy dia miasa haingana ary manome anao ny format malalaka. Azo ampiasaina izy io raha tsy mametraka Python amin'ny fitaovana misy anao. Ankoatra izany, mila manana fahatakarana fototra momba io fiteny fandaharana io ianao.
4. Ny FMiner
FMiner dia iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra sy mahasoa indrindra. Raha oharina amin'ny programa hafa mitovy, FMiner dia azo itokisana kokoa ary manana endrika tsara kokoa. Manala ireo angona izy na dia avy amin'ireo tranonkala sarotra indrindra aza ary manohana ny format Java sy AJAX. Izy io koa dia mahazo data ao amin'ny format MySQL sy Oracle, arakaraka ny fepetra takinao.
OutWit dia iray amin'ireo programa mahomby indrindra sy mahasoa indrindra momba ny angon-drakitra. Io no fampivelatra ny Firefox amin'ny saran-danjan'ny fanangonana data. Manitsy ny fikarohana ao amin'ny Internet ny Outwit ary manampy amin'ny alàlan'ny tranonkala isan-karazany.
Data Toolbar dia afaka manamboatra ny dingam-pandehan'ny data ho an'ny fandefasanao. Raha mikasa ny hanangona angon-drakitra avy amin'ny tranonkala samihafa ianao dia mila manandramana Data Toolbar.
Ny tsara indrindra amin'ny iMacros dia ny fahafahana mamolavola asa miverimberina. Na tianao hampiasa izany ao amin'ny Firefox na Google Chrome, iMacros dia manohana ireo browsers ary manampy anao hivezivezy amin'ny tranonkala maro. Plus, manampy amin'ny famoahana latabatra sy lisitra web ho fampahalalana azo ampiasaina.
9. Google Scraper
Ity dia tranonkala fandinganana angona ahitam-bokatra izay miasa toy ny Outwit sy Import. io. Google web scraper dia natao hamolavolana ireo rakitra avy amin'ny lahatsoratra sy PDF. Tsy maintsy asongadinao ireo angona ilainao, ary ity fitaovana ity dia hanome anao dika mitovy amin'ny ora iray. Azonao atao ny mamonjy ny angona amin'ny Google Drive.
Extracty dia programa iray vaovao maimaim-poana nefa mahavariana izay ampiasaina amin'ny teknolojia fianarana milina. Azonao atao ny mamorona API miaraka amin'ity programa ity ary mikaroka tranokala manontolo anatin'ny segondra Source .